Iingcebiso zovavanyo lwe-A / B kwiiMvavanyo zikaGoogle zokuDlala | Martech Zone
Abaphuhlisi beapps ze-Android, Uvavanyo lweGoogle Play inokubonelela ngolwazi oluxabisekileyo kunye nokunceda ukwandisa ukufakwa. Ukuqhuba uvavanyo olucwangciswe kakuhle kunye nolucwangciswe kakuhle lwe-A / B lunokwenza umahluko phakathi komsebenzisi ofaka usetyenziso lwakho okanye okhuphisana nalo. Nangona kunjalo, kukho iimeko ezininzi apho iimvavanyo ziqhutywa ngendlela engafanelekanga. Ezi mpazamo zinokusebenza ngokuchasene neapp kunye nokwenzakalisa ukusebenza kwayo.
Nasi isikhokelo sokusebenzisa Uvavanyo lweGoogle Play kuba A uvavanyo / B.
Ukuseta uvavanyo lweGoogle Play
Ungafikelela kwiConsoleal yokulinga ngaphakathi kwiDeshibhodi yeGoogle Play Developer Console. Yiya e Gcina Ubukho kwicala lasekhohlo lesikrini uze ukhethe Uludwe lweeVenkile. Ukusuka apho, unokukhetha "Uvavanyo olutsha" kwaye usete uvavanyo lwakho.
Zimbini iintlobo zovavanyo onokuziqhuba: Uvavanyo lweNdawo emiselweyo yeMizobo kwaye Uvavanyo lwasekhaya. Uvavanyo lweMpawu eziGqibeleleyo luya kuqhuba kuphela iimvavanyo kwimimandla ngolwimi olukhethileyo njengolwendalo lwakho. Uvavanyo lwendawo, kwelinye icala, luya kuqhuba uvavanyo lwakho kuwo nawuphi na ummandla apho usetyenziso lwakho lufumaneka khona.
Ixesha langaphambili likuvumela ukuba uvavanye izinto zoyilo ezinjengeempawu kunye nezikrini, ngelixa elokugqibela likuvumela ukuba uvavanye iinkcazo zakho ezimfutshane nezinde.
Xa ukhetha uvavanyo lwakho, hlala ukhumbula ukuba umahluko ovavanyayo, ungathatha ixesha elide ukufumana iziphumo. Zininzi izinto ezahlukeneyo ezinokubangela kuvavanyo olufuna ixesha elininzi kunye nokugcwala kwabantu ukuseka ithuba lokuzithemba elimisela impembelelo enokubakho kuguquko.
Ukuqonda Iziphumo zovavanyo
Njengoko uqhuba iimvavanyo, unokulinganisa iziphumo ngokusekwe kwiifayile zokuQala zeXesha okanye iiFakelo eziGciniweyo (Usuku olunye). AmaXesha okuQala okuFakela ziinguqu ezipheleleyo eziboshwe kukwahluka, kunye nabaFaki abagciniweyo baba ngabasebenzisi abagcina usetyenziso emva kosuku lokuqala.
Ikhonsoli ikwabonelela ngolwazi ngoku (kubasebenzisi abafake usetyenziso) kunye ne-Scaled (zingaphi izinto onokuzifumana ngokuzithemba ukuba umahluko ufumene i-100% yezithuthi ngexesha lovavanyo).
Isithuba sokuzithemba esingama-90% siveliswa emva kokuba uvavanyo luqhutywa ixesha elide ngokwaneleyo ukufumana ulwazi olunokwenzeka. Ibonisa ibha ebomvu / eluhlaza ebonisa indlela oguquko olunokuthi luhlengahlengiso lwethiyori ukuba umahluko ubusasazwa bukhoma. Ukuba ibha iluhlaza, lutshintsho oluqinisekileyo, bomvu ukuba alilunganga, kunye / okanye yomibini imibala kuthetha ukuba inokujikela kwicala elinye.
Ezona ndlela zilungileyo zokuqwalaselwa kuvavanyo lwe-A / B kuGoogle Play
Xa uqhuba uvavanyo lwakho lwe-A / B, uya kufuna ukulinda de kube kumiselwe ixesha lokuzithemba ngaphambi kokwenza nasiphi na isigqibo. Ukufaka ngokungafaniyo kunokutshintsha kuyo yonke inkqubo yovavanyo, ke ngaphandle kokwenza uvavanyo ixesha elide ngokwaneleyo ukuseka inqanaba lokuzithemba, umahluko unokwenza ngokwahlukileyo xa usetyenziswa bukhoma.
Ukuba akukho zithuthi zaneleyo zokuseka ithuba lokuzithemba, unokuthelekisa imeko yokuguqula iveki neveki ukuze ubone ukuba kukho naziphi na izinto ezihambelanayo ezivelayo.
Uyakufuna ukulandelela ifuthe emva kokuthunyelwa. Nokuba ixesha lokuzithemba lithetha ukuba umahluko wovavanyo ngewenze ngcono, ukusebenza kwawo ngoku kusenokwehluka, ngakumbi ukuba kukho ixesha elibomvu / eliluhlaza.
Emva kokuhambisa okwahlukileyo kovavanyo, gcina iso ekubonakaliseni kwaye ujonge indlela ezichaphazeleka ngayo. Impembelelo yokwenyani inokwahluka kunokuba bekuxelwe kwangaphambili.
Nje ukuba ugqibe kwelokuba yeyiphi eyona nto isebenzayo, uya kufuna ukuyilungisa kwaye uyihlaziye. Inxalenye yenjongo yovavanyo lwe-A / B kukufumana iindlela ezintsha zokuphucula. Emva kokufunda ukuba yintoni esebenzayo, unokwenza izinto ezintsha ogcina iziphumo engqondweni.
Umzekelo, xa usebenza ne-AVIS, uGummicube uhambe kwimijikelo emininzi yovavanyo lwe-A / B. Oku kuncede ekuboneni ukuba zeziphi izinto eziyilayo kunye nemiyalezo eguquke kakuhle abasebenzisi. Le ndlela ivelise ukonyuka okungama-28% kunyuko olusuka kuvavanyo lomzobo wedwa.
Ukulungiswa kubalulekile ekukhuleni kweapp yakho. Kuyanceda ukuba uqhubeke nokucofa ucofa uguqulo lwakho njengoko iinzame zakho zikhula.
Uvavanyo lwe-A / B lunokuba yindlela elungileyo yokuphucula usetyenziso lwakho kunye nokubanzi Ukulungiswa kweVenkile yeApple. Xa useta uvavanyo lwakho, qiniseka ukuba ulinciphisa inani lokwahluka okuvavanyayo ngaxeshanye ukukhawulezisa iziphumo zovavanyo.
Ngexesha lovavanyo, jonga ukuba ufakelo lwakho luchaphazeleka njani kwaye lubonisa ntoni ixesha lokuzithemba. Abasebenzisi abaninzi ababona usetyenziso lwakho, kokukhona amathuba akho ekumiseleni imeko ehambelana neziphumo.
Okokugqibela, uya kufuna ukuphindaphinda. Iteration nganye inokukunceda ufunde ukuba yeyiphi eguqula ngcono abasebenzisi, ukuze uqonde ngcono ukuba ungayisebenzisa njani i-app kunye nomgangatho. Ngokuthatha indlela yokwenza uvavanyo lwe-A / B, umphuhlisi unokusebenzela ekukhuliseni usetyenziso lwabo ngakumbi.
tags: Uvavanyo lweNdawo emiselweyo yeMizobogoogleI-Google Play Developer ConsolegummicubeUvavanyo lwasekhayaulingo olutshaabagcini abagciniweyoGcina Ubukho
UDave Bell ngusomashishini kunye novulindlela owaziwayo kwicandelo lokonwaba ngeselfowuni kunye nokuhanjiswa komxholo wedijithali. UDave nguMsunguli weNtsebenziswano kunye ne-CEO yeGummicube - umboneleli ohamba phambili weedatha, iteknoloji kunye neenkonzo zoLungiso lweVenkile ye App.
Ukuqalisa iphulo lakho lokuThengisa iVidiyo ngeendlela ezintathu
I-RFP360: Itekhnoloji eKhanyayo yokuThatha iintlungu kwiRFPs